Chelsea Oo Finalka Gaartay Kadib Barbardhii Barca Iyo Torres Oo 50kii Milyan Iska Guday + Sawiro + Video Goals
Kooxda Chelsea oo finalka sanadkan Champions League 2012ka soo gaartay, kadib iska caabin weyn ay kala hortageen kooxda haysata koobkan weyn ee Barcelona.
Barcelona oo gurigooda lagu ciyaarayay ayaa heshay fursad qaali ah markii ay gool ku hor mareen, wax yar kadibna garoonka laga saaray John Terry, taas oo qasab ka dhigtay in Chelsea ku aruurto xariiqda ganaaxa wixii intaa ka danbeysay.
Ramires ayaa dhabar jebin xun la helay goolhaye Valdez iyo kooxdiisa Barcelona qeybtii hore ee ciyaartana kusoo dhameeyay 2 gool iyo 1 ay Barcelona u kala dhaliyeen goolasha Busquet iyo Iniesta, markii la isku soo laabtayna waxaa xukunkii garoonkii la wareegay Barcelona oo qeybtii danbe ee ciyaarta iska qasaarisay Rigoore uu birta ku garaacay Messi.
Dhamaadkii ciyaarta ayaa bedel lagu soo geliyay Fernando Torres oo bedelay Drogba, waxaana dad badan is weydiinayeen sababta uu bedelkan u sameeyay tababaraha mucjisada sanadkan Roberto Di mateo oo helay jawaabta bedelka uu sameeyay markii uu Torres kubada ula tagay Valdez si tartiib ahna shabaqa ugu dhaliyay, ciyaartiina ka dhigay 2 iyo 2.
Dhamaan taageerayaashii Chelsea oo garoonka ku jiray ayaa farxad la ilmeeyay kuna qeyliyay in 50kii Milyan ee Torres qasaara noqon oo uu isaga guday 10 daqiiqo uu ku jiray garoonka Camp Nou.
Chelsea ayaa hada sugeysa cida soo badisa Real Madrid iyo Bayern oo kulankoodii hore kusoo dhamaaday 2 gool iyo 1 oo ay Bayern hogaanka ku hayso. waana Finalkii 2aad oo ay Chelsea soo gaarto 4tii sano ee ugu danbeysay.